Nuxurka warbixin Guddiga baadhista dhacdadii Galbeed maanta u gudbinayso Madaxweynaha | Somaliland.Org
September 23, 2010	Hargeysa (Somaliland.Orggaal)- Guddi loo saaray dhacdo ay dhowaan boqolaal ka tirsan jabhadda ONLF kaga soo degeen xeebta gobolka Awdal, ayaa la filayaa inay maanta warbixin u gudbiyaan Madaxweynaha Somaliland.
10 kii bishan, waxa xeebta u dhexaysa degmooyinka Lughaya iyo Saylac ka soo degay inka badan laba boqol oo askari oo la sheegay inay ka tirsan yihiin jabhadda ONLF oo watay saanadoodii ciidan, kuwaasoo si fudud ugu talaabay dhinaca dalka Itoobiya.
Hase yeeshee, Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxa uu u saaray guddi sagaal xubnood ka kooban, si ay baadhitaan ugu sameeyaan sababaha keenay in ciidankaasi ogaansho la’aan kaga soo dagaan xeebta Awdal, Somalilandna kaga gudbaan si fudud.
Guddigaas oo uu guddoomiye u yahay wasiirka Difaaca Somaliland Axmed Xaaji Cali Cadami, waxay maalintii la magacaabayba socdaal ugu baxeen degaamadaas.
Ma jiro war rasmi ahaan guddiga iyo Madaxtooyadu ka soosaartay warbixinta la filayo inay maanta gudbiyaan, hase yeeshee siday ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen Wargeyska Ogaal, guddigu waxay muddooyinkii u dambeeyay xogwaraysiyo kala duwan la yeesheen dad ka tirsan degaanka dhacdadu ka dhacday, askar, saraakiisha ciidamada ee degaankaas iyo dhinacyo kale. “Waxaanu waraysanay ilaa 60 qof, warbixintana waxaanu gudbinaynaa Arbacadda (maanta), waxaananu u gudbinaynaa Madaxweynaha,” sidaa waxa yidhi mid ka mid ah guddigaas.
Warku wuxuu intaa ku daray, in warbixintu koobsanayso xaalada ku gedaaman dhacdadaas iyo xal-u-helideeda, waxayna si mugleh uga hadlaysaa geedi-socodkii arrintaas ciidanka ajaanibka ahi kaga soo degeen dalka iyo talaabooyinka ay qaadeen.
Sida warku sheegay, guddigu waxay waraysi la yeesheen Taliyaha ciidamada Milateriga Mr. Nuux Ismaaciil Taani, Taliyaha aagga galbeed Mr. Maxamed Xudhuun oo la sheegay in la keenay Hargeysa iyo saraakiil kale oo ciidamada ka tirsan. Sidoo kale, guddigu waxay waraysiyo la yeesheen masuuliyiinta maamulka gobollada Awdal iyo Salal, si gaar ahna degmooyinka dhinaca xeebta ee ay arrintaasi ka dhacday.
Dhinaca kale, Taliye kuxigeenka laanta Dambi-baadhista qaranka ee CID-da, ayaa xabsiga loo taxaabay. “Waa la hayaa, waana la baadhayaa,” sidaana waxa yidhi xubin kale oo ka tirsan guddigaas. “Waxa loo haystaa dhacdadii ka dhacday Boorama ee eedaysanaha lagula baxsaday, sababtoo ah isagaa Maxaabiista soo qaaday,” ayuu raaciyay.
Previous PostFadexado & Musuqmasuq Xukuumadda Hore Ee Md Rayale & Masuuliyiin BadanNext PostWasiirka Macdanta Oo Kormeeray Xarunta Biyo-soo-saarka Hargaysa Ee Geeddeeble	Blog